Fire HD 10, ny takelaka Amazon dia nohavaozina matanjaka sy marevaka kokoa | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 26/05/2021 10:00 | General, hevitra
Amazon manohy miloka amin'ny demokrasia amin'ny sehatra marobe miaraka amin'ireo vokatra fototra ao aminy, toy izany no nanombohan'ny orinasan'i Jeff Bezos vokatra marobe izay nahomby tamin'ny ankapobeny noho ny sandam-bola be. Anisan'ireny izahay manana mpandahateny, e-boky ary tablette mazava ho azy.
Mijanona aminay ary fantaro ny antony mahatonga ireo takelaka Amazon mora vidy indrindra ireo, ary inona no fahaizany ara-teknika, liana ve ianao ny mividy azy ireo?
Toy ny saika matetika, nanapa-kevitra izahay fa hiaraka amin'ny fanadihadianay lalina amin'ny alàlan'ny video iray fantsona YouTube anay, Amin'ity horonantsary ity dia ho hitanao ny famoahana boaty feno hijerena ny atin'ny boaty amin'ity Amazo Fire HD 10. Mazava ho azy, manao fitsapana ihany koa izahay amin'ny alàlan'ny fitaovana, amin'ireo toetrany misimisy kokoa ary na dia ireo aza. efijery sy ireo mpandahateny azy, amin'izay mety ho famenon-tsarimihetsika tsara amin'ny famakiana an'ity fanadihadiana ity. Aza adino izany ary avelao ny fanontaniana ao anaty boaty hevitra.
2 Toetra ara-teknika sy fifandraisana
3 Rafitra miasa sy traikefan'ny mpampiasa
4 Traikefa amin'ny haino aman-jery multimedia
Amin'ity tranga ity dia nanapa-kevitra i Amazon fa tsy hanavao mihitsy, ny orinasa Jeff Bezos dia miloka amin'ny famolavolana sy fitaovana matotra loatra angamba, na dia tsy hisarika ny saintsika aza izy ireo noho ny sakafo matsiro, dia hanao izany izy ireo noho ny fanoherany tsara. kapoka sy rangotra. Toy izany koa no nitranga tamin'ity Fire HD 10 avy any Amazon ity izay mitazona ireo fitaovana sisa tavela amin'ilay orinasa ary noho izany dia mamela antsika ireo famaranana ivelany somary boribory hiaraka amin'ny fampiasana maharitra, Matte mainty sy somary henjana polycarbonate ary ny sary mitsiky ihany no ao ambadik'ity takelaka lehibe ity noho ny habeny.
Amazon's Fire HD 10 dia nihena avy amin'ny kinova taloha ho 465 grama
Dimensions: X X 247 166 9,2 MG
Manana fakan-tsary aoriana izahay amin'ny zoro ambony, mitovy amin'ny fomba any amin'ny tapany ambony misy ny fifandraisana sy ny bokotra rehetra, seranan-tsambo USB-C, seranan-tsambo Jack 3,5 mm, bokotra roa ary bokotra herinaratra. Amin'ny lafiny iray, ny takelaka lamba, izay tsy trandrahana, dia manana endriny fisaka izay manampy ny fametrahana mpiaro. Manana ny fakantsary ho an'ny antso an-tsary miorina amin'ny ilany ankavia isika raha mampiasa azy io ary eo amin'ny tapany afovoany ambony raha ampiasaintsika mitsivalana izy, toa ny niniana natao.
Toetra ara-teknika sy fifandraisana
Amin'ity fizarana ity, Amazon dia tsy nanjary nalaza noho ny fampidirana ny haitao farany sy ny haitao farany ho an'ny fitaovan'ireto fitaovana ireto, fa amin'ny fanandramana hanolotra fifandraisana akaiky eo amin'ny kalitao sy ny vidiny. Amin'ity tranga ity dia nampiditra processeur izy ireo Cores valo amin'ny 2,0 GHz ny mpanamboatra azy tsy fantatsika, na dia asehon'ny zava-drehetra fa MediaTek io araka ny fanadihadianay. Ny RAM dia mitombo hatramin'ny 3 GB amin'ny fitambarany raha miloka amin'ny tahiry 32 GB na 64 GB arakaraka ny maodely voafantina.
Mampifandray dia ananantsika Dual band WiFi 5, izay nampiseho tamin'ny zava-bita tsara nataontsika, tamin'ny tambajotra 2,4 GHz sy 5 GHz. Bluetooth 5.0 LE qIanao no ho tompon'andraikitra amin'ny famindrana feo ho an'ny headphones na mpandahateny tsy misy tariby, rehetra nefa tsy manadino ny seranana Jack 3,5 mm fa ity Fire HD 10 dia ao anatin'ny tapany amboniny.
Raha ny fakantsary, MP 2 ho an'ny fakantsary anoloana ary 5 MP ho an'ny fakan-tsary any aoriana izay hanampy antsika tsy ho afaka amin'ny olana, scan ny antontan-taratasy ary ... hafa ihany.
Rafitra miasa sy traikefan'ny mpampiasa
Araka ny fantatrao tsara, ny vokatra Amazon's Fire, na takelaka na fitaovana fahitalavitra marani-tsaina, dia manana kinova Android namboarina izay mifantoka amin'ny mpampiasa Amazon. Manana Fire OS izahay, sosona Android izay tsy manana Google Play Store, Na izany aza, afaka mametraka APKs isika avy amin'ny loharano ivelany izay heverinay fa mety, satria izy ireo dia hifanaraka tanteraka. Amin'ny lafiny iray, ny Operating System dia tsy manana bloatware mihoatra ny fampiharana miharo Amazon, ary ny fanatsarana ny hardware dia nisy fiantraikany tamin'ny fotoana hitetezana moramora kokoa.
Amin'ny lafiny iray, manana mpizahatany izahay izay azo hatsaraina, izay azonao soloina haingana amin'ny Chrome raha tianao. Ho fanampin'izany, ao amin'ny magazay fampiharana Amazon dia afaka miditra amin'ny kinova Netflix, Disney + isika ary ny sisa amin'ireo mpanome atiny audiovisual streaming. Na izany aza, manindry mafy aho fa ny fametrahana APK avy amin'ny loharano ivelany dia saika adidy iray izay tsy misy sakana.
Amin'ny lafiny iray, ny takelaka ampiasaina dia mifantoka mazava tsara amin'ny fihinanana atiny, mamaky, mijery na mijery horonan-tsary. Raha ny filalaovana lalao video dia manomboka mahita olana hafa amin'ny fampisehoana isika, araka ny antenaina amin'ireo fitaovana efa voalaza etsy ambony.
Traikefa amin'ny haino aman-jery multimedia
Araka ny efa nolazainay teo aloha, mifantoka amin'ny zava-misy fa handany atiny izahay, ary noho izany dia zava-dehibe ny famakafakana ny zava-bitan'ny Amazon Fire HD 10. Amin'ity tranga ity, nilaza ny orinasa fa nampitombo ny famirapiratan'ny efijery 10% raha oharina amin'ny kinova taloha, zavatra tsikaritrao am-pahatsorana, ka mahafinaritra azy kokoa ny mampiasa any ivelany. Na izany aza, tsy hoe manana famirapiratana miavaka manokana isika, izay nanampy ny tsy fisian'ny fitaovana manohitra taratra izay midika fa afaka manana olana amin'ny masoandro feno isika, zavatra iray izay tsy mahazatra.
habe Pikantsary: ​​10,1 santimetatra
vahaolana: 1.920 x 1.200 teboka (224 dpi)
Raha ny amin'ny feo, manana andiana mpandahateny roa napetraka tsara izahay izay hanolotra mifanentana amin'ny Dolby Atmos ho fanampin'ny stereo mahazatra. Miasa bebe kokoa noho ny marina izy ireo ary manolotra feo mafy be mba hankafy horonan-tsary, sarimihetsika ary mozika.
Mikasika ny fizakan-tena, tsy misy fahaiza-manao mAh dia afaka milaza aminao izahay fa nanana roa na telo andro nampiasana mora foana izahay, noho izany dia niaraka ny seranan-tsambo USB-C sy ny charger 9W ao anatiny izay Amazon dia tsara fanahy ampidirina ao anaty boaty. Raha atambatra, 12 ora eo ho eo ny fotoana fijerena.
Hitanay ny takelaka 10,1-inch, fitaovana maoderina ary koa ny vidiny ary tolotra mahaliana mikendry indrindra ny fihinana atiny, na avy amin'ireo sehatra natolotry ny Amazon tenany na avy amin'ireo mpamatsy ivelany. Manodidina ny 164,99 euro ny vidiny ho an'ny kinova 32 GB ary 204,99 euro ho an'ny kinova 64 GB. Na dia marina aza fa amin'ny tolotra manokana dia afaka mahita takelaka vita tsara isika amin'ny vidiny mitovy amin'ny orinasa toa an'i Chuwi na Huawei, ny antoka sy fahafaham-po atolotry ny Amazon dia afaka mitana fananana lehibe amin'ity raharaha ity. Azo alaina amin'ny 26 Mey ao amin'ny tranokala Amazon izy io.
Navoaka tamin'ny: May 26 amin'ny 2021
Fanovana farany: May 23 amin'ny 2021
Volavola sy fitaovana noheverina fa manohitra
Rafitra miasa tsy misy bloatware
RAM 1GB fanampiny no tsy hita
Manintona manokana ny vidiny amin'ny tolotra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Fire HD 10, ny takelaka Amazon dia nohavaozina matanjaka kokoa sy mamirapiratra